Bitcoin Sports Betting Guide - Zero Ku Mamiriyoni MuHana Nguva! - Bitcoin Odds Checker
Mitambo yekutengesa inogona kuva inonakidza ikozvino kuti vakawanda vanowanzobhejera vanozadzisa nzvimbo. Kunyange zvazvo zvichiita sekunakidza kuedza, zvinogona kunge zvichinyanyisa kune vanotanga, kunyanya mari iri pangozi. Kana ukangotaura nezvekutya kurasikirwa, Bitcoin mitambo yokubheja anogona chaizvo kuva mubayiro. Kwete chete iwe unosvika pakunakidzwa nekubheja pamitambo yako yaunofarira, iwe unewo mukana wekuunza mari huru yekubhadhara kana yakaitwa zvakanaka. Kana iwe uchida chaizvo kuedza mitambo yekubheja uye kwete kurasikirwa noupenzi, tevera iyi Bitcoin yemitambo yekutengesa mutungamiriri.
Kuti uitange nemuvaraidzo uyu weBitcoin mitambo yekubheja, chinhu chimwe chaunofanira kunge uchiziva nacho ndicho Bitcoin sports kubheta. Izvo zvinowanzonyanya kukoshesa kana zvasvika pamitambo yekubheja. Zvisinei, iyo inopesana iyo inotarisa kana kuiswa kwebheti kuchikosha kana kwete. Kana mukana wekuitika kune wakaderera, wepamusoro matambudziko achave. Paunenge uchitengesa pane imwe nharaunda iyo ine mikana yakakosha yokukunda, maitiro ako anowedzera zvakanyanya.
Iro mitatu yakawanda inowanikwa yakawanda yevhiringidzika inonzi Decimal, Fractional, uye America. Decimal Odds ndiyo inowanzoita maitiro. Decimal Mitsara yakaenzana nehuwandu hwepamusoro hwechikamu chiduku, pamwe chete. Fractional Odds inotsanangura iyo yose yenhamba iyo bettor inowanikwa, iyo inopindirana nedanda ravo. American Odds anoshanda nekuratidzira mari yakawanda yaunofanira kuisa pangozi kuitira kuti uwane $ 100.
Kusarudza bhukiki nemikana yakanakisisa kunofanira kuiswawo kufunga. Kuva nechivimbo chakavimbika parutivi rwako kunokupa chivimbo uye kunokonzera kutengesa kusingabhadharwi, kusarudzwa kwakasiyana-siyana, uye zvechokwadi, kusachengetedzwa kwemajeri uye kubvisa.
Mitambo yekutengesa mitambo
Chimwe chikonzero chokufunga mubhuku iri reBitcoin kutengesa mutambo ndiyo yakasiyana nemitambo yemitambo yekutengesa. Yakawanda mitambo yemitambo yekutengesa ndeyeMari line, Usatengesa pari, Totals pamusoro / pasi, uye Futures yemakwikwi kwetambo kana mutori wegore. Mari yemabheti anokubvumira kubheji pamigumisiro yemutambo. The Draw hapana kutengesa kutsvaga boka rinokunda mutambo. Kana kuteka kuchiitika, bheti yakabviswa uye iwe unowana kubhadhara kwepanda yako. Zvose zviri pasi / pasi zviri kutengesa kana mitsara yose yemitambo ichave yakapfuura kana pasi pe nhamba. Pakupedzisira, Futures inoreva kutengesa mumutambo wepakati kana mutambo. Dzimwe mhando dzebhaji dzinosanganisira Point Point Spread uye Parlays. Mukutanga, iwe pari pane rimwe boka rakarwara pane imwe nhamba yepfungwa. Muchikamu chekupedzisira, rutsva rwebhapiti rimwe pachayo ruchaita bheji rimwe chete. Kana bheti inopera, bheji rose rinorasikirwa zvakare.
Ita tsvakurudzo yako
Paunenge uchitengesa, zvingava zvinonakidza kwauri kuti uende pabheji dzako kana kutotanga high roller Bitcoin betting Ipapo. Asi kana chako chekutanga chiri kukunda, iwe unofanirwa kufunga zvine hungwaru kana uchiisa mabheti ako. Izvo zvakakosha kuti iwe uongorore chokwadi nezvekuti zvimwe zvinhu zvinokanganisa sei mhedzisiro yemutambo. Tarisa maitiro apfuura evatambi uye ona kubva ipapo maitiro avachaita mumutambo unotevera. Tarisa uone kana paine chero kukuvara kunogona kukanganisa timu-kumusoro. Kune huwandu hwakawanda hwehuwandu hwaungashandisa kuona kuti nderipi timu rine ruoko rwepamusoro. Kuongorora kwakadai kunobatsira iwe kuhwina mabheti ako.
Kugumisa iyi Bitcoin mitambo yekutengesa mabhuku, zvinokurudzirwa kuti iwe uende pane mabhuku mabhuku aB Bitcoin. Tarisa yedu Bitcoin sports review mapeji emakambani ekupedzisira uye akawanda ekudzidzisa mazita. Kubheja neBitcoin kunokubvumira kuti iwe uwedzere mari uye zvisizvo zvinenge zvisingakupi mhosva. Pamusoro peiyo, iwe unotanga kubhesa zvisingazivikanwi. Nezvo zviri nyore iyo inounza, hazvishamisi kuti iyi mari yakawanda inofanirwa kuonekwa semari yakakodzera yekutenga mitambo yepaInternet.